Go'aaminta Alaabooyin, Adeegyo ama Tilmaamo cusub | Martech Zone
Toddobaadkan waan helay La soco In ka Suuqgeynta Waxqabadka.
Waxaan ahay qiyaastii seddex meelood meel ka mid ah habka loo marayo buugga hadda oo aan ku raaxeysto. Waxaa jira tusaalooyin fara badan oo gacan-ka-hadal ah oo ku saabsan sida hubris-yada ganacsigu ay ugu hoggaamiyeen waddada go'aannada saboolka ah maxaa yeelay iyagu kuma 'toosin' rajadooda. Iyaga oo aan garanaynin waxa ay rajadoodu u baahan tahay, shirkaduhu waxay bilaabayeen alaabooyin, adeegyo ama astaamo stinotiyiin ah.
Markii ay soo ifbaxday baraha bulshada iyo websaydhka, waxaan u maleynayaa inuu jiro isku dheelitirnaan marka aad go'aan ka gaareyso alaabooyin cusub, adeegyo, ama astaamo, in kastoo, taas oo ka sii dheer rajada. Hadda macmiilku waa suuq-geyn suuqeed adag, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato iyaga sidoo kale. Buuggu wuxuu dhiirrigeliyay qoraalkan.
Waa tan qaabka aan u qaato go'aaminta mudnaanta alaabada, adeegyada ama astaamaha cusub ee aan ka shaqeeyo:
Maxaa ku dheggan Si kale haddii loo dhigo, maxaan horumarinayaa oo hagaajinaya sii-haynta macaamiisha? Haddii aad tahay iibiyaha SaaS, tusaale ahaan, ma leedahay API? API-yada waa kuwo cajiib ah maxaa yeelay waxay u baahan yihiin lambar yar, taageero yar, waxayna u baahan yihiin maalgashi gudaha ah oo uu kuu sameeyo macmiilkaagu si uu ula qabsado alaabtaada.
Waa maxay xasaasi? Wax soo saarka qaarkood, adeegyada, ama astaamaha ayaa u qalma miisaankooda sababtoo ah saameynta ay ku yeelan doonaan warshadaha. Mid ka mid ah tusaalaha ugu weyn ee tan ayaa ah dalab mobilada makhaayadaha. Inkasta oo dukaamada waaweyn ee pizza wali 10% ka helaan iibkooda khadka tooska ah, haddana waxay maalgashi ku sameeyeen mobilada.
Maalgashiga wuxuu u badan yahay inuu noqdo ganacsade khasaaray maxaa yeelay khibrada isticmaale ee taleefanka ayaa nuuga. Si kastaba ha noqotee, waxay ahayd inay u tartamaan inay xalliyaan xalka si ay u helaan buunbuuninta. The buunbuunin cusub ayaa ah aalado.
Sidenote: Waxaan rumeysanahay in amarrada mobilada iyo aaladaha casriga ay maalin walba yeelan doonaan - laakiin gebi ahaanba dib ayaa loo horumarin doonaa waqti ka dib markii teknolojiyaddu soo hagaagayso. Ganacsiyadan ayaa maal-galiyay kuwaan hadda sababtoo ah buuqa iyo ganacsiga aan tooska ahayn - maahan natiijooyinka ganacsiga tooska ah.
Waa maxay Naagu qalantaa? Macaamiishaadu waxay wax ka abaabulayaan khadka tooska ah iyo khad la'aanta. Shaqaaluhu waxay u janjeeraan inay ku ekaadaan warshadaha laakiin waxay u guuraan shirkado kala duwan. Taasi waxay ka dhigan tahay in suuq-geynta Ereyga Afku uu muhiim yahay oo ganacsigaagu u baahan yahay inuu u arko fursad. Haddii aad abuurto wax soo saar, adeeg ama muuqaal ay macaamiishaadu muus ka saaraan, waxaad si fiican u aaminsanaanaysaa inay dadka kale ee warshadaha ka tirsan u sheegayaan!
Maxaa Lagu Iibin Karaa? Tani inta badan waa fikradda ka dambeysa wixii aan illaa iyo hadda ka akhriyay La soco In. Tani waa qodobka ugu weyn ee kobcinta ganacsigaaga - sheygaaga, adeeggaaga ama muuqaalkaagu waa inuu buuxiyo ganacsi u baahan. Si kale haddii loo dhigo, adoo iibsanaya badeecadaada - faa'iidada ganacsigeygu wuu ka miisaan badan yahay kharashka. Haddii aysan baahi jirin halkaas, waxaa laga yaabaa inaadan guuleysan doonin. Ka iibinta barafka Eskimos waa quraafaad.
Mid ka mid ah arrimahan ayaa laga yaabaa inuu beddelo mid kale. Waqtiyada qaarkood, waxaan ku soo saarnay astaamo cusub si fudud dalabyada rajooyinka aad u ballaaran. Waxay ahayd khamaar, laakiin waxaan aqoonsannay in maal-gashigu wax tari doono xitaa haddii aanaan macaamminin macmiilkaas gaarka ah. Waxaan aaminsanahay in khariidad weyn ay tahay inay ku wada jiraan afartaas dadaal.
Tags: 6 talaabo oo suuq geyn ahkobcinta waxyaabahataageero macaamiishanaqshadeynta naqshadeyntajuquraafi ahaaneedjuqraafi seohabka suuq geyntahagaajinta barbaarintahagaajinta maxalliga ahSuuqgeynta Waxqabadka
WordPress Ku Biirida Xarunta CMS